St. Augustine Biography - UBhishophu waseHippo
UMbhishophu waseHippo eNyakatho Afrika (354-430 AD)
USt Augustine, umbhishophu waseHippo enyakatho Afrika (354-430 AD), wayengomnye weengqondo ezinkulu zecawa yokuqala yamaKristu, isazi semfundiso yenkolo esineengcamango ezingapheliyo ezithonya amaRoma Katolika namaProthestani .
Kodwa u-Augustine akazange eze ebuKristwini ngendlela ecacileyo. Xa wayesemncinci waqala ukufuna iinyaniso kwiingcamango zobuhedeni ezaziqhelanisiweyo kunye neenkcubeko zemihla yakhe. Ubomi bakhe obutsha babunobunzima bokuziphatha okubi.
Ibali lokuguquka kwakhe, elichazwe kwincwadi yakhe ethi Confessions , linye yeengqungquthela ezinkulu zobuKristu bexesha lonke.
I-Augustine's Crooked Path
U-Augustine wazalelwa ngo-354 eThagaste, kwiphondo elisentla lase-Afrika laseNumidia, ngoku iAlgeria. Uyise, uPatricius, wayengumhedeni owayesebenza aze alondoloze ukuze unyana wakhe athole imfundo efanelekileyo. UMonica, unina, wayengumKristu ozinikeleyo othandaza rhoqo unyana wakhe.
Ukususela kwimfundo eyisiseko kwisixeko sasekhaya, u-Augustine waqhubela phambili ukufunda iincwadi zakudala, waya eKarthage ukuze aqeqeshe kwi-rhetoric, exhaswe ngumntu onokuthiwa nguRomanianus. Inkampani embi yaholela ekuziphatheni okubi. UAgasine wathatha inkosikazi wazala unyana, uAdeodatus, owafa ngo-390 AD
Ebhekiswe ngendlala yakhe yobulumko, uAgasine waba nguManichean. I-Manicheism, eyasungulwa ngumfilosofi wasePersian Mani (216-274 AD), ufundiswe ubuqhetseba, ukwahlukana okunzima phakathi kokulungileyo nokubi. NjengeGnosticism , le nkolo ithatha ulwazi olufihliweyo yindlela yokusindiswa .
Wazama ukudibanisa iimfundiso zikaBuddha , uZoroaster kunye noYesu Kristu .
Ngelo xesha, uMonica wayethandazela ukuguquka kwonyana wakhe. Okokugqibela kwenzeka ngo-387, xa u-Augustine wabhaptizwa ngu-Ambrose, umbhishophu waseMilan, e-Italy. UAgasine wabuyela kwindawo yakhe yokuzalwa yaseThagaste, wanyulwa njengomfundisi, kwaye emva kweminyaka embalwa waba ngumbhishophu weSixeko saseHippo.
UAugustine wayenengqiqo enengqiqo kodwa wagcina ubomi obulula, kufana ne- monk . Wakhuthaza iindwendwe kunye neengqungquthela ngaphakathi kwebhishophu yakhe eAfrika kwaye wayamkela rhoqo iindwendwe ezaziyokwenza incoko yokufunda. Wayesebenza ngaphezu kombingeleli waseParish kunobhishophu ongekho, kodwa ebomini bakhe wayehlala ebhala.
Kubhalwe kwiintliziyo zethu
UAugustine wafundisa ukuba kwiTestamente Endala (umnqophiso omdala), umthetho wawungaphandle kwethu, ubhalwe kwiipilisi zamatye, iMithetho Eyishumi . Lo mthetho wawungeke ube negalelo , kuphela ukugqithisa.
KwiTestamente Entsha, okanye umnqophiso omtsha, umthetho ubhaliwe ngaphakathi kwethu, ezintliziyweni zethu, wathi, kwaye senziwe singamalungisa ngokungenelela kobabalo lukaThixo noluthando lwe-agape .
Ukuba ubulungisa abuveli kwimisebenzi yethu, nangona kunjalo, kodwa uyaphumelela ngathi ngokufa kukaYesu emnqamlezweni , ubabalo lwakhe lufika kuthi ngoMoya oyiNgcwele , ngokukholwa nokubhaptizwa.
UAugustine wakholwa ukuba ubabalo lukaKristu aluyikwi-akhawunti yethu yokulungisa isigwebo sethu, kodwa kunokuba sisinceda ekugcineni umthetho. Siyaqonda ukuba ngokwethu, asikwazi ukuwugcina umthetho, ngoko siqhutyelwa kuKristu. Ngobabalo, asiyigcini umthetho ngenxa yokwesaba, njengasemnqophiso omdala, kodwa ngenxa yothando, wathi.
Ngaphaya kobomi bakhe, u-Augustine wabhala ngesimo sesono, uZiqu zintathu , intando yokuzikhethela kunye nomntu wesono, iisramramenti kunye nokubonelelwa nguThixo . Ukucinga kwakhe kwakunzima kakhulu kangangokuba ezininzi iingcamango zakhe zanikela isiseko sobufundisi bezeKrestu iminyaka emininzi.
Imisebenzi emibili eyaziwayo ka-Augustine yi- Confessions , kunye neSixeko sikaThixo . Kwi- Confessions , uxelela ibali lokuziphatha okubi ngokwesini kunye nonina. Uchaza uthando lwakhe ngoKristu, esithi, "Ngoko ke ndiyeke ukuzinyamezela kwaye ndifumane uvuyo kuwe."
Isixeko sikaThixo , esibhaliwe ngasekupheleni kobomi bukaAugustine, kwakukho ukukhusela ubuKristu eMbusweni waseRoma . Umbusi uTheodosius wayenokwenzela ubuKristu obunobuthathu inkolo esemthethweni yolawulo ku-390.
Iminyaka engamashumi amabini emva koko, iVibigoths yabarbara, eyayiholwa ngu-Alaric I, i- Rome ixotshiwe . AmaRoma amaninzi athi ubuKrestu, besithi ukuguquka kwimiba yamandulo yaseRoma kwabangela ukuba banqotshwe. Intsalela yesiXeko sikaThixo iyahlukana nemizi yasemhlabeni neyesezulwini.
Xa ebengumbhishophu waseHippo, uSt. Augustine wasungula iindwendwe zamadoda kunye nabasetyhini. Kwakhona wabhala umthetho, okanye isethi yemiyalelo, yokuziphatha kwamakholi kunye namadoda. Kwaye kwada kwafika ngo-1244 ukuba iqela leendwendwe kunye neengcingo ziboshwe ndawonye e-Italy kunye ne-Order of St. Augustine yasungulwa, esebenzisa loo mgaqo.
Kwiminyaka engama-270 kamva, i-Augustinian friar, kunye nengcali yeBhayibhile njengoAgasine, yavukela emininzi yemigaqo kunye nemfundiso yecawa yamaRoma Katolika. Igama lakhe kwakunguMartin Luther , kwaye waba ngumntu oyintloko kwiNguqulelo yamaProtestanti .
(Imithombo: www.carm.org, www.britannica.com, www.augustinians.net, www.fordham.edu, www.christianitytoday.com, www.newadvent.org, Confessions , St Augustine, i-Oxford University Press, ukuguqulela kunye neenkcukacha zikaHenry Chadwick.)